Indlela uMongameli anyuliweyo - Inkqubo yoNyulo
Oko Kufuneka Kufike kwiNdlu eNtshonalanga
Ngoko ufuna ukuba ngumongameli we-United States. Ufanele ukwazi: Ukukwenza kwiNdlu ye-White House ngumsebenzi onzima, ukuthetha ngokuchanekileyo. Ukuqonda indlela umongameli ukonyulwa ngayo kufuneka kube yinto ephambili kuqala.
Kukho imirhumo yemithetho yezemali yokukhankanya ukuhamba, amawaka amasayinithi ukuba aqokelele kuwo onke ama-50 amazwe, abathunywa beentlobo ezithembisayo kunye ezingenakufakwa kwi-intanethi ukuze bavule isandla, kunye neKholeji yoConyulo eyoyikisayo.
Ukuba ulungele ukungena kwi-fraythi, masihambe ngeendlela ezili-11 ezibalulekileyo zendlela umongameli ukonyulwa ngayo e-United States.
Inyathelo 1: Ukudibanisa iimfuno ezifanelekileyo
Abaviwa bakaMongameli kufuneka bakwazi ukubonakalisa ukuba "ngummi ozalwe ngumvelo" wase-US, baye bahlala kweli lizwe ubuncinane iminyaka eyi-14 kwaye ubuncinane ubuneminyaka engama-35 ubudala. Ukuba "uzalwa ngokuzalwa" akuthethi ukuba ufanele uzalwe emhlabeni waseMerika , nokuba. Ukuba omnye wabazali bakho ngummi waseMelika, oko kulungile. Abantwana abanabemi baseMelika bayabonwa ngokuba "ngabemi bomhlaba," kungakhathaliseki ukuba bazalwa eCanada, eMexico okanye eRashiya.
Ukuba udibana nale miqathango emithathu yokwenza umongameli, unako ukuqhubela phambili kwisinyathelo esilandelayo.
Isinyathelo. 2: Ukumemezela ukukhetha kwakho kunye nokwenza iKomiti yezoPolitiko
Ixesha lokufumana kunye neKhomishoni yoKhetho lwe-Federal, elilawula ukhetho e-United States.
Abaviwa bakaMongameli mabazalise "inkcazo yokubaviwa" ngokuchaza ukubandakanya iqela labo, iofisi abayifunayo kunye nolwazi oluthile njengendawo abahlala kuyo. Uninzi lwabaviwa luzalise le fomu kuwo onke unyulo loongameli - abaviwa abaninzi baseMelika abazange bave kwaye ngubani ovela kumacandelo ezopolitiko angabonakaliyo, angaphantsi kwamanye amazwe.
Le nkcazo yomviwa iphinda ifune ukuba ngumbuso wezopolitiko, iqumrhu elicebisa imali kubalandeli ukuba bachithe kwiimpapasho zethelevishini kunye nezinye iindlela zokhetho, njengabo "ikomiti yecandelo eliphambili." Oku kuthetha ukuba umviwa ugunyazisa omnye okanye ngaphezulu kwe-PAC ukufumana inkxaso kunye nokwenza iindleko egameni labo.
Abaviwa bakaMongameli bachitha ixesha labo bezama ukunyusa imali. Ngo- 2016 ukhetho lomongameli , umzekelo, iKomidi yeRiphablikhi yaseRiphablikhi yaseRiphabliki yeComputer - uDonald J. Trump kuMongameli we-Inc. - wakhulisa malunga neerandi ezingama-351 yezigidi, ngokubhekiselele kwiirekhodi ze-Federal Electoral Commission. Ikhomishana yekhampani eyintloko yeHillary Clinton - uHillary for America-iphakame iiligidi ezingama-586 yezigidi.
Inyathelo lesi-3: Ukufikelela kwiBota eliPrayimari kwiManyano aseMerika njengoko kunokwenzeka
Le ngenye yezona nkcukacha ezincinci kakhulu zendlela umongameli anyuliweyo ngayo: Ukuze abe ngumongameli weqela eliphambili, abaviwa kufuneka bahambe kwinkqubo ephambili kuwo wonke urhulumente. Iimviwo zokuqala zikhethwe ngamaqela ezopolitiko kwiindawo ezininzi zokunciphisa intsimi yabaviwa abafuna ukutyunjwa komnye. Amaqela ambalwa abamba ukhetho olungakhethiweyo olubizwa ngokuba ngamaqhekeza.
Ukuthatha inxaxheba kwimibandela yokubaluleka kubalulekile ekuwongeni amagosa, okuyimfuneko ukuphumelela ukhetho lomongameli. Kwaye ukuba uthathe inxaxheba kwimibandela yokuqala, kufuneka ufike kwiibhaliso kwimeko nganye. Iquka abaviwa bakazwelonke abaqokelela inani elithile labasayinwa kwilizwe ngalinye - kumazwe amaninzi adinga amakhulu eminyaka amathinitsha - ukuba afune ukuba amagama abo avele kwivoti.
Ngoko ke ingongoma: yonke ikampu yomongameli esemthethweni kufuneka ibe nenkqubo eqinile yabaxhasi kulowo nalowo uya kusebenza ukuhlangabezana nale mfuneko yokufikelela kwevota. Ukuba bafikeleleka kummandla omnye, bashiya abathunywa abanokubakho kwitafile.
Inyathelo 4: Abanini abaphumeleleyo kwiNdibano
Abathunywa ngaba bantu abaya kwiinkqubo zokutyunjwa kweengqungquthela zomongameli ukuba bavose amavoti egameni labathengi abaphumelele kwimigqaliselo kwilizwe labo.
Amawaka eendwendwe eziya kwiintlanganiso zamaRiphablikhi kunye neDemokhrasi ukwenzela ukwenza lo msebenzi.
Abathunywa bahlala behlala kwezopolitiko, abaphathi abakhethiweyo okanye abazingeli. Amanye amagosa "azinikele" okanye "athenjiswe" kumviwa othize, oku kuthetha ukuba bavote ukuba bawine i-primaries yelizwe; abanye bangabikho mthethweni kwaye banako ukufaka ivoti zabo nangona bakhethayo. Kukho "ama- superleglegates ", amagosa aphakamileyo aphakamileyo, abafumana ukuxhasa abaviwa abazikhethelayo.
AmaRiphabhlikhi afuna ukutyunjwa kukaMongameli kwiminyaka-mali ye- 2016 , umzekelo, kufuneka ukukhusela abathunywa aba-1,144. I-Trump yawela umda xa iphumelele kwi-Primary North Dakota ngoMeyi 2016. Abademokhrasi abafuna ukutyunjwa kukaMongameli ngaloo nyaka kwakudinga i-2,383. U-Hillary Clinton wafikelela kwinjongo ngoJuni 2016 emva kweprayimari yasePuerto Rico.
Inyathelo lesi-5: Ukuthatha i-Running-Mate
Ngaphambi kokuba kwenziwe idibano yokutyunjwa, uninzi lwabaviwa belunyulo lukhethe ukhetho lomongameli , umntu oza kuvela kwi-voti kaNovemba. Kuphela kabini kwimbali yanamhlanje abakhethiweyo bamongameli balindile de iindibano zidibanise iindaba kuluntu nakumaqela abo. Utyunjwa loongameli weqela lakhe ngokukhethekileyo wakhetha umlingane wakhe ngoJulayi okanye ngo-Agasti wonyaka wokhetho lonyulo.
Inyathelo 6: Ukwenza iiNgxabano
Ikhomishana kwiNgxabano zikaMongameli ithatha iingxoxo ezintathu zikaMongameli kunye neengxoxo-mphini kamongameli emva kokuqala kwee-primaries naphambi koonyulo lukaNovemba.
Nangona iimpikiswano ngokuvamile zingathinteli kwisiphumo sotyulo okanye zenze iinguqu ezinkulu kwiintetho zokuvota, zibalulekile ekuqondeni apho abaviwa bemi kwimibandela ebalulekileyo kwaye bavavanya amandla abo okwenza phantsi koxinzelelo.
Ukusebenza kakubi kunganciphisa ugqirha, nangona kungabikho nto eyenzekayo ngenxa yokuba izombusazwe ziqeqeshwe kwiimpendulo zabo kwaye ziye zaba nekhono lokukhwela ingxabano. Imbango yayiyimpikiswano yomongameli wokuqala we-televised, phakathi kwe-Vice-President uRichard M. Nixon , waseRiphablikhi kunye no-US Sen John F. Kennedy , uMdemokhrasi, ngexesha le-1960.
Ukubonakala kukaNixon kwachazwa ngokuba "okuluhlaza, ukucola" kwaye wabonakala enesidingo sokuhlamba. I-Nixon ikholelwa ukuba ingxoxo yokuqala yomnxeba we-televised ibe "yinto enye yokujonga umkhankaso" kwaye ayizange ithathe ngokungqongqo; Wayenobumba, ekhangelekile kwaye ekhukhulayo, ukubonakala kwakunceda ukutywinwa kokufa kwakhe. UKennedy wayazi ukuba umcimbi wawunomdla kwaye wawuhlala ngaphambi. Uphumelele ukhetho.
Inyathelo lesi-7: Ukuqonda iMini yoNyulo
Kwenzeka ntoni ngaloo Lwesibini emva koMvulo wokuqala wokuqala kaNovemba kunyaka lonyulo loongameli ngowomnye wezinto ezingenakuqondwa ngazo indlela umongameli ukonyulwa ngayo. Umgca wezantsi kukuba: abavoti abakhethi ngokukhethekileyo umongameli wase-United States. Kunoko bakhetha ukhetho abaya kudibana kamva ukuvota umongameli .
Abavoti ngabantu abakhethiweyo ngamaqela ezopolitiko kwiphondo ngalinye. Kukho ama-538 kubo. Umviwa udinga uninzi olulula - iivoti ezivela ku-270 zabathethi-ukuphumelela.
Amazwe anikwe abakhethiweyo ngokusekelwe kubemi bawo. Inani elikhulu labemi likarhulumente, ngaba abakhethiweyo baninzi babelwe. Ngokomzekelo, iCalifornia yindawo ephakamileyo kakhulu enezigidi ezingama-38. Kwakhona kubamba abaninzi abakhethiweyo kwi-55. I-Wyoming, ngakolunye uhlangothi, lizwe elincinci elinabantu abangaphantsi kwama-600,000 abahlali; kuba kuphela abathathu abavoti.
Ngokwe-National Archives and Records Administration:
Amaqela ezombusazwe ahlala ekhetha abakhethi be-slate ukuba baqaphele inkonzo kunye nokuzinikezela kwiqela lezopolitiko. Basenokuba ngamagosa akhethwe ngurhulumente, iinkokeli zeqela likarhulumente, okanye abantu baseburhulumenteni abanomntu okanye umbutho wezopolitiko kunye nomongameli weqela lakhe. "
Isinyathelo 8: Ukuthabatha abaTyuli kunye namaVote oNyulo
Xa umviwa onguMongameli anqoba ivoti ethandwayo kwilizwe, ufumana amavoti okhetho lolo rhulumente. Ema-48 kuma-50 athi, abaviwa abaphumeleleyo baqokelela onke amavoti okhetho kunjalo. Le ndlela yokunika ivoti yokuvota iyaziwa ngokuba yi-"winner-take-all." Kwimiba mibini, i-Nebraska ne-Maine, iivoti zokuvota zihanjiswa ngokulinganayo ; Bayabelana ngamavoti abo okhetho kunyulo lwababongameli ngokubhekiselele kulokho bebhetele ngakumbi kwisithili ngasinye.
Nangona abo bakhethiweyo bengavumelekile ngokomthetho ukuvotela umviwa ophumelele ivoti elidumiweyo kwilizwe labo, akunakwenzeka ukuba bahambe kwaye banganaki ukuthanda kwabavoti. "Abakhethi bahlala benobunkokeli kwiqela labo okanye bakhethwa ukuba baqaphele iminyaka yokunyaniseka kwenkonzo kwiqela," ngokubhekiselele kwi-National Archives and Records Administration. "Kuphela kwimbali yethu njengesizwe, abangaphezu kwama-99 ekhulwini labakhethiweyo bavotelwe njengamathembisi."
Inyathelo 9: Ukuqonda iNdima yeKholeji yoNyulo
Abaviwa bakaMongameli abaphumelele ukuvota ama-270 okanye ngaphezulu ivoti yokuvota kuthiwa ngumongameli-nyuliwe. Abayi kuthatha iofisi ngaloo mini. Kwaye abanako ukuthatha i-ofisi kuze kube yilapho ama-538 amalungu eKholeji yoNyulo ehlangene ukuze ahlawule amavoti. Intlanganiso yeKholeji yoNyulo iqhutywe ngoDisemba, emva koonyulo, kwaye emva koburhulumente baseburhulumenteni bafumana iziphumo zonyulo "eziqinisekisiweyo" kwaye balungiselela iziqinisekiso ze-Ascertainment kuburhulumenteni.
Abakhethi badibana kwiindawo zabo kwaye bahambisa i-tallies kwi-vice-ngameli; nobhala beSebe likaRhulumente kwilizwe ngalinye; yomgcini welizwe; kunye nejaji elilawulayo kwizithili apho abavoti baqhuba iintlanganiso zabo.
Emva koko, ngasekupheleni kukaDisemba okanye ekuqaleni kukaJanuwari emva kokhetho lonyulo lukazwelonke, umgcini-mali wesigqeba kunye nabameli be-Ofisi ye-Register ye-Federal badibana noNobhala we-Senate kunye noMmeli weNdlu ukuqinisekisa iziphumo. I-Congress iyadibana kwiiseshoni ezidibeneyo ukuvakalisa iziphumo.
Inyathelo 10: Ukuqalisa Ngosuku Lokuvulwa
NgoJan. 20 ngumhla wonk 'umongameli ofunayo ukhangele phambili. Ngumhla kunye nexesha elichazwe kuMgaqo-siseko wase-US ukwenzela ukuguqulwa kokuthula kwamandla ukusuka kwelinye ulawulo ukuya kwelinye . Yesiko kumongameli ophumayo nentsapho yakhe ukuba abe khona ukufunga-kungena kumongameli ongenayo, nokuba ngaba bavela kwimibutho eyahlukeneyo.
Kukho ezinye izithethe, nazo. Umongameli oshiya i-ofisi uhlala ebhala inqaku kumongameli ongenayo anika amazwi akhuthazayo kunye nezifiso ezilungileyo. "Ndiyakuvuyisana ngokuhamba okuphawulekayo," u-Obama wabhala encwadini eya kwiTrump. "Izigidi ziye zabeka ithemba labo kuwe, kwaye sonke, kungakhathaliseki ukuba siphi na iqela, kufuneka sibe nethemba lokunyuka nokukhuseleko ngexesha lokuhlala kwakho."
11. Ukuthatha iOfisi
Oku, kunjalo, isinyathelo sokugqibela. Kwaye ke inxalenye enzima iqalisa.
I-Meat Loaf Biography
"Ugqirha Olungileyo" nguNeil Simon
Projekthi yeBlue Rainbow Science Project
Ukusebenzisa i-AIS kwisiKhenketho sakho